musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Trending Now » Ko iyo Coronavirus yakabva kupi chaizvo?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
CIA yakaedza ndokudzoka isina chinhu. IUS ingafarire kupomera murabhoritari yeChinese nekuda kwekudonha, nepo China ichidzosera kumashure uye ichinongedza munwe pabazi reUS kudzoka.
Iyo CIA nemamwe maUS Spy agency vakadzoka vasina maoko vakapa mushumo wavo pamusoro pekuti COVID-19 yakatanga sei uye neChina kubatana.
Mutungamiri weUS Biden akaudzwa neChipiri manheru nezve mhedzisiro yeiyi ongororo
Mubvunzo waive uye unosara kana iyo Coronavirus yakatanga zvakasikwa kana yaive mhedzisiro yelebhu inodonha tsaona kana kuyedza.
Chirevo cheCIA nezveChina
Kuongorora uku, uko kwakarairwa neMutungamiri weUnited States Biden mazuva makumi mapfumbamwe apfuura, kunoratidza chinetso chakaoma chehutungamiriri chekuwana ruzivo uye kubatana kubva kuCentral Chinese Government muBeijing.
Vaimbove Mutungamiri Trump vakadaidza COVID-19 iyo Chinese Virus.
Mukutanga kweVirusi iyo World Health Organization (WHO) yakarumbidza China mumhinduro yayo yeCoronavirus.
China yakazeza kugovana marekodhi erabhoritari, masampuli ejenomiki, uye imwe data iyo inogona kupa kuvhenekera kwakatangira hutachiona, sekureva kwechinyorwa pane gwaro idzva rehungwaru rakaburitswa nhasi mu Wall Street Journal.
Mhedziso kusvika parizvino ndeyekuti China haisi kuzopa mukana kune mamwe ma data seti, chokwadi hachizombobuda.
Iyo Wall Street Journal yakafukidza kuda kwepasirese kwemhinduro, ichitevera World Health Organisation, vanachiremba uye masayendisiti kuChina nepasirese, nharaunda yevasori yeU.S. zviratidzo zvakasiyana. Heano zvimwe zvekutsvaga kwakakosha.
Ongororo yeWall Journal yakawana kuti China yakaramba kumanikidzwa nedzimwe nyika kuongorora kwayakaona sekuedza kupa mhosva, kunonoka kuferefetwa kwemwedzi, kuchengetedza kodzero yeveto pamusoro pevatori vechikamu uye yakaramba ichikomberedza dzimwe nyika zvakare.
Chikwata chinotungamirwa neWHO chakaenda kuChina kutanga kwa2021 kunoongorora kwakatangira hutachiona chakanetseka kuwana mufananidzo wakajeka wekuti tsvagiridzo yaiitwa neChina zvisati zvaitika, yakatarisana nezvipingamupinyi panguva yekushanya kwayo kwemwedzi, uye yakanga iine simba shoma rekutsvagisa, kusasarura pasina chikomborero chehurumende yeChina. Mumushumo wavo wekupedzisira, vaongorori vakati hwakakwana humbowo hwaireva kuti havagone kugadzirisa kuti hutachiona hwatanga riini, kupi uye sei.
Mishumo muChinese inoshamwaridza midhiya yakaverenga: Sangano reUN Chishanu rapfuura rakakurudzira chikamu chechipiri chedzidzo mune kwakatangira iyo coronavirus mu China ndokudana China "Kuva pachena uye kuvhura uye kushandira pamwe."
Mushure mekunge ongororo yakabatana yeWHO-China yapedza kuti kwave kupedza nguva kutarisa dzidziso iyi yekufa munaKurume, Mutungamiri weUS, Joe Biden akateedzera uyo akamutangira Donald Trump uye akakumbira imwe ongororo paWuhan-based bio lab.
Asi maAmerican Biolabs mazhinji ariwo pakati pekufungidzirwa kwekubuda, uye vanhu vazhinji vechiChinese vakaisa chiratidzo paFort Detrick, iyo labhiapon lab yakagadzwa panguva yeHondo Yenyika II.
China Ministry yekune dzimwe nyika neMuvhuro yakadana kuWorld Health Organisation (WHO) kuti ichengetedze chinzvimbo chayo chesainzi nehunyanzvi mukutsvaga kwakatangira COVID-19 uye nekupokana zvine mutsindo nezvematongerwo enyika enyaya iyi sezvairi kugadzirira chikamu chechipiri cheongororo.
Sangano reUN nemusi weChishanu wadarika rakapa danho rechipiri rezvidzidzo kwakatangira coronavirus kuChina uye rakakumbira China "kuti ive pachena uye izarurire uye ishandire pamwe."
Chirevo cheWHO hachienderani nechinzvimbo cheChina nenyika zhinji, mutauriri weChinese Foreign Ministry Zhao Lijian akaudza musangano wezuva nezuva wenhau.
Zano rechikamu chinotevera chekudzidza nezvepasi rose chinofanira kutungamirwa nenyika dzenhengo sezvakabvumiranwa pachisarudzo che73th World Health Assembly, Zhao akadaro.
"Tinotarisira kuti WHO nenhengo dzenhengo dzinotaurirana nemaune uye dzinotaurirana uye dzinoteerera zvakanyanya pfungwa nemazano emapato ese uye nekuona kuti chirongwa chehurongwa hwebasa chiri pachena uye chakajeka," akaudza vatori venhau, achiwedzera chikumbiro cheWHO. pane mavambo kudzidza kuri kuongororwa nenyanzvi dzeChinese.
Kwakatangira kudzidza inyaya yesainzi uye inoda kubatana kwemasayendisiti pasirese, Zhao akadaro, apo achishora nyika shoma, kusanganisira iyo US, nezvematongerwo enyika hutachiona.
MaChinese akachinja mhosva achitarisa Maryland US Lab.
Kubva neMuvhuro masikati, vanopfuura mazana manomwe nemakumi mashanu ezviuru zvevagari vekuChina vakasaina tsamba yakabatana kuWHO, vachida kuti sangano riite ongororo kubazi reUS.
"IUS inofanirwa kutarisana nemanzwi enharaunda dzenyika dzese kusanganisira maChinese, uye vape nhoroondo inogutsa", akadaro Zhao.
China Ministry Yezvekunze yakaramba ichidana kuWashington kuti ipindure kunetseka kwepasirese pamusoro payo marabhoritari uye kukoka nyanzvi dzenyika dzepasi rose kuti dziongorore njodzi dzadzo.
Kutsvaga kwakabva hutachiona kwave nyaya yekudyidzana yakasimudzira hukama hweChina neUS pamwe nevazhinji vanobatana muAmerica. IUS nevamwe vanoti China haina kubuda pachena nezve zvakaitika mumazuva ekutanga edenda. China inopomera vatsoropodzi kuti vari kuda kuipomera denda iri uye kuita zvematongerwo enyika nyaya inofanirwa kusiirwa vesaenzi.
Zvinotaridza sekuti chokwadi hachizombobuda, nepo zviuru zvinofa zuva rega rega nekuda kwechero chii chakaitika neCOVID-19.